News 18 Nepal || युवा युवती कस्तो जीवनसाथी खोज्छन् ?
काठमाडौं । आफ्नो वैवाहिक जीवन बारे धेरैलाई उत्सुकता हुन्छ । कस्तो जीवनसाथी रोज्ने ? कसरी सम्बन्ध अगाडि बढाउने ? घर–परिवारको सुखका लागि कसरी आपसमा तालमेल मिलाउने ? आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? परिवारको समृद्धिका लागि कसरी सहयोगी भूमिका खेल्ने ? नेपाली समाजमा एउटा भनाई छ, विवाह र मृत्यु मान्छेको हातमा छैन । कतिले चाहेर पनि विवाहको मेलोमेसो मिलाउन सक्दैनन् ।
कतिले अनायसै जोडी बाध्छन् । अतः विवाहअघि जसरी कल्पना गरिएको हुन्छ, त्यस अनुरुप जीवनसाथी मिल्छ भन्ने कुनै टुंगो हुँदैन । आफुले बनाएको मापदण्ड अनुसारको जीवनसाथी फेला पर्छ ? निश्चित छैन । यद्यपि जो कोहीले आफुसँग सम्पूर्ण जीवन विताउने साथीको परिकल्पना गरेका हुन्छन् । उनीहरुले कस्तो जीवनसाथी खोज्छन् त ?
विवाहपछि सबै कुरा ठीक ठाक मिल्छ भन्ने हुन्न । कतिपय कुरामा आपसी मतभेद हुन्छ । झगडा हुन्छ । यस्ता वाधा–अवरोधहरुले नै दाम्पत्य सम्बन्धलाई अरु परिपक्क बनाउँदै लान्छ । अतः यस किसिमको उतारचढावमा पनि आफुलाई समान रुपमा प्रेम गर्ने । सुखदुःमा साथ दिने, भावना बुझ्ने जीवनसाथी होस् भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । जुनसुकै प्रतिकुलतामा समेत आफुलाई ख्याल राख्ने जीवनसाथी खोज्ने गरिन्छ ।
धेरै गंभिर वा संवेदनशिल मान्छेसँग जीवन विताउन त्यती सहज हुँदैन । त्यसैले युवायुवतीहरु यस्तो जीवनसाथीको अपेक्षा गर्छन्, जो हँसमुख होस् । ख्यालठट्टा गर्ने स्वभावको होस् । घर परिवारको माहौललाई रमाइलो बनाइराख्ने स्वभावको होस् । यद्यपि परिवार प्रति गैरजिम्मेवार भने होइन ।